60% အထိတောင် ဈေးလျှော့ပေးထားတဲ့ UGREEN's Clearance Sale !!! ~ The ICT.com.mm Blog
60% အထိတောင် ဈေးလျှော့ပေးထားတဲ့ UGREEN’s Clearance Sale !!!
HDMI ကြိုး၊ Audio ကြိုး၊ Lightning To USB ကြိုးအပါအဝင် USB ကြိုးအမျိုးမျိုးနဲ့ Car Charger, Wireless Charger, Bluetooth Transmitter, Audio Adapter, Phone Holder, Type C to HDMI and VGA converter စတဲ့ “UGREEN” တံဆိပ် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါနော်။
Final Clearance Sale ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ်မရနိုင်တော့တဲ့အခွင့်အရေးလေးမို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အခုပဲဝယ်ယူထားလိုက်တော့နော်။
Buy now » https://www.ict.com.mm/collections/ugreen
#ShopICT #Myanmar #UGreen #Clearancesale #orderonlinenow #ICT #mobileaccessories
Older မနက်ဖြန် အိုင်စီတီမှာ 10.10 အထူး ပရိုမိုးရှင်း ရှိတာ သိပြီးကြပြီလား??